Imisebenzi - Xiamen Changshu Industrial Co., Ltd.
Siyakwazisa ukufunda, ukuphrakthiza nokusungula izinto ezintsha.Izimiso zethu ezibalulekile zisebenza kuwo wonke umuntu enkampanini, futhi sikholelwa ukuthi sizophumelela uma sinesifiso esifanayo.
Iziqu:abanomqondo ocacile, abasebenza kanzima, abangaba ngabanakho.
Izimiso Zokukhetha: kungakhathaliseki ukuthi izikhundla zobuchwepheshe noma zokuphatha, sikhetha ngesimiso sokuthi ufanelekile ngokuyisisekelo emsebenzini wamanje futhi une-plasticity eyanele yokuguqulwa kwesikhathi esizayo.Uhlelo lwethu oluthuthukisiwe lwe-“Fast Fostering” luzoveza amakhono akhe aphelele futhi lumnike amakhono engeziwe.
Ukuqeqesha & Ukukhula
Sikholelwa ukuthi abasebenzi kufanele bakhule kanye nenkampani, ngakho-ke sikhuthaza wonke umuntu ukuthi afunde futhi akhule ngenkathi esebenza.Ukuzibekela inselele kanye nokuzidela kuyimimoya ehlonishwa kakhulu e-Changsu.
Sula Izindlela Zomsebenzi
Ukuze sizuze ukuthuthukiswa kokuwina kwakho kokubili inkampani kanye nabasebenzi, senza ukuphathwa kwemisebenzi yabasebenzi, sibakhuthaze ukuthi bahlole amakhono abo nezindlela zabo zemisebenzi ngokuqhubekayo.Uhlelo lwe-Core Position Succession kanye noHlelo Lokushintshana Ngemisebenzi kubasebenzi ababalulekile nakho kunendima ku-Changsu.Ngakho-ke abasebenzi bakhetha izindlela zabo zemisebenzi ngokwentshisekelo yabo, futhi bagxile kakhulu kumakhono abo noma abaphathi, njengoba kuboniswe ngezansi.
Yakha Inhlangano Egxile ekufundeni
Sizibophezele ekwakheni inhlangano egxile ekufundeni ukuze sikhuthaze imimoya yokusebenzisana kubasebenzi ngokubanikeza amathuba okuqeqeshwa nokufunda njalo ukuze sivuse ikhono lawo wonke umuntu nentando yabo yokubambisana, ukufaka isandla kanye nokwenza impumelelo yabo kanye neqembu.
Izinhlelo Zokuqeqesha Eziningi Neziphelele
Sihlinzeka ngamathuba abanzi okufunda kubasebenzi bethu, okuhlanganisa Ukujwayela, ukuqeqeshwa kwamakhono ochwepheshe, ukuqeqeshwa kwamakhono okuphatha, ukuqeqeshwa okunwetshiwe komsebenzi weqembu, i-EMBA, izinhlelo ze-EDA zabasebenzi abakhethekile nabaphathi abathuthukile, namasemina obuchwepheshe nophenyo.
Abacebisi kanye “Nohlelo Lokuthwala”
Ngosuku lokuqala isisebenzi esisha sifika enkampanini, umnyango wakwa-HR usinika umeluleki ozomsiza afinyelele endaweni entsha ngokushesha futhi athuthukise amakhono aso ochwepheshe futhi amqondise ekuhleleni umsebenzi ongcono.
Siheha futhi sibagcine abantu ngenkokhelo encintisanayo kanye nendlela yokulungisa isinxephezelo esebenzayo exhumanisa iholo lomuntu nokusebenza kwakhe kanye negalelo lakhe, sivala igebe emalini etholwa abantu ngabanye futhi sivimbele ukulingana.Ngaleso sikhathi, asizifaki izici zomuntu siqu futhi sinquma isinxephezelo somuntu ngokuhlola ukusebenza kwakhe ngezindinganiso ezilinganiselwe eziqondile.
Ngaphandle kwazo zonke izinzuzo zomthetho kazwelonke, sinendaba kakhulu nemizwa yomuntu siqu nezidingo zabo bonke abasebenzi ukuze sibenze bazizwe besekhaya.Izinzuzo zethu ezengeziwe yilezi: ihholo lokudlela labasebenzi, amabhasi okuphelezela, amaphathi okuzalwa, izipho zosuku lokuzalwa, ibhonasi yomshado, ibhonasi yokuthela, imali yenduduzo yemingcwabo, ibhonasi yelungelo lobunikazi, izimali zomsebenzi wesigaba, umsebenzi wokugembula wekhekhe lenyanga, isidlo sakusihlwa sokuphela konyaka njll. Izikhungo nemisebenzi eyahlukene ithandwa kakhulu, njengomtapo wezincwadi, indawo yokufundela nekhofi, indawo yokuzivocavoca, indawo yokuphumula, usuku lwamasiko nolwezempilo, umhlangano wezemidlalo, njll.
Ubusuku Bangaphambi Konyaka Omusha
Sikholelwa ukuthi abasebenzi kufanele bakhule kanye nenkampani, ngakho sikhuthaza wonke umuntu ukuthi afunde futhi akhule ngenkathi esebenza.Ukuzibekela inselele kanye nokuzidela kuyimimoya ehlonishwa kakhulu e-Changsu.
Sicela ubeke iso kushejuli nezindaba ze-Campus Recruitment futhi uqinisekise ukuthi i-imeyili yakho nefoni kuyatholakala.
① Sibheke ngabomvu ukuxhumana nawe ubuso nobuso futhi samukela ngokweqiniso wonke umuntu onentshisekelo.Kuzobandakanyeka isingeniso esinemininingwane.
② Kwabaphuthelwe umbukiso wemisebenzi, sicela uvakashele iwebhusayithi yethu ethi www.chang-su.com.cn ukuze uthole ulwazi olwengeziwe kanye nesicelo somsebenzi.
③ Sizophakamisa isikhundla esikufanele kakhulu ngokuya ngentshisekelo yakho nesizinda sakho.Inguqulo yokugcina kanye nekhophi.
Sizoba nomhlangano wenhlolokhono ngemuva kombukiso wemisebenzi.Sicela uthathe izinto ezihlobene nawe uma uye emhlanganweni: umbhalo osemthethweni (owavalwa yisikole), isitifiketi sezinga lesiNgisi (noma umbhalo), isitifiketi sezinga lekhompyutha, nanoma yiziphi ezinye izinto ezifakazela ukusebenza kwakho esikoleni (inguqulo yokuqala nekhophi kwayo).
Sizokwazisa ukuthi usayine isivumelwano somsebenzi uma wamukelwe.Uma unquma ukwamukela okunikezwayo, sicela unikeze okwangempela kanye nekhophi yombhalo osemthethweni.
Isihloko somsebenzi: Unjiniyela Womsizi Kagesi
Isihloko somsebenzi: Umabhalane wohwebo lwangaphandle
Isihloko somsebenzi: Isazi Socwaningo Lwemakethe
Isihloko somsebenzi: Umakhenikha umsizi kanjiniyela
Isihloko somsebenzi: Omele ukuthengisa (expat)
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, xhumana nomnyango wakwa-HR: